Golaha Kabineega DDSI Oo Kulan Layeeshay Wafti Heer Federal ah - Cakaara News
Golaha Kabineega DDSI Oo Kulan Layeeshay Wafti Heer Federal ah
Jigjiga(Cakaaranews) Axad, 24ka July 2016. Golaha kabineega DDSI oo uu hogaaminayo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha kulan kulayeeshay wafti heer federal ah oo ay hogaaminayaan wasiirka wasaarada horumarinta warshadaha JDFI mudane Axmed Abite, wasiiru dawlaha wasaarada horumarinta warshadaha JDFI mudane Tadese Haile, wasiirka horumarinta shirkadaha yaryar iyo kuwa dhex-dhexaadka ah ee JDFI mudane Asfew Abebe iyo waliba madaxwayne kuxigeenka bangiga horumarinta warshadaha.
Waxaana kulankan furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayn isbaray waftiga heer federal iyo golaha. Kadibna, guriga usoo dhigay ujeedada socdaalka waftigan oo ahaa in deegaanka laga hirgalinayo qaabdhismeedka heerarka kaladuwan ee warshadaha islamarkaana wuxuu hadalka kuwareejiyay wasiirka wasaarada horumarinta warshadaha dalka mudane Axmed Abite iyo xubnaha kale ee wehelinayay.
Hadaba, wasiirka wasaarada horumarinta warshadaha mudane Axmed oo ay wehelinayeen wasiiru dawlaha wasaarada iyo dhamaan maamulayaasha heerarka kaladuwan ee warshadaha dalka oo kahadlay kulanka ayaa soo dhigay qorshe 4ta dawlad deegaan ee taageerada gaarka ah lasiiyo lagaga hirgalinayo qaabdhismeed buuxa oo heerarka kaladuwan ee warshadaha ah gaar ahaan warshadaha yaryar, kuwa dhexe iyo kuwa sare intaba. Wuxuuna carabka kudhuftay inay qorshe ahaan xusheen 12 magaalo oo kamid ah 4ta dawlad deegaan islamarkaana looga baahan yahay deeegaanka dhulkii laga samayn lahaa warshadaha iyo maalgaliyeyaashii. Waxayna sheegeen in bangiga horumarinta warshadaha laga furayo 5 magaalo oo deegaankeena ah oo kala ah: jigjiga, qabridahar, dhagaxbuur, godey iyo doolo-cado.
Kadibna, golaha ayaa waftiga waydiiyay su’aalo dhinacyo badan taabanayay iyo talooyin gashi unoqonaya hirgalinta aas-aaska warshadaha iyagoo si wayn ugala hadlay arinta ribada iyo in shaqaalaha warshaduhu noqdaan kuwo deeegaanka ah.
Ugudanbayna, waftiga ayaa booqasho kutagay warshada caanaha ee deegaanka iyo warshada hilibka oo ay runtii aad ubogaadiyeen iyagoo balanqaaday inay suuqyo caalami ah usamaynayaan. Waxayna deegaankeena ku amaaneen horumarka kajira iyo khayraadka kaladuwan ee dhirta iyo xoolaha sida: macdanta, fooxa, xabagta, malabka iyo anfaca xoolaha kuwaas oo ubaahan in looga faaiidaysto dhanka warshadaha si waxsoosaarka dhoofinta dalkeenu sare ugu koco islamarkaana aan bulshadeena uga saaro saboolnimada, ugana midha dhalino wareega 2, aad ee qorshaha koboca iyo isbadalka dhaqaalaha dalka. Kadibna aan garab kanoqono wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. waxaa kale oo ay aad ubogaadiyeen hanaanka looga guuray xoolo-dhaqatonimadii habka casriga ah ee xoolodhaqato beeralay.